निर्मला बलात्कार पछि हत्याका सय दिन, अपराधी संरक्षणमा सरकार - TV Annapurna
November 2, 2018 November 2, 2018 Annapurna TV
ठोकुवाका साथ भन्नुपर्दछ, निर्मलाको बलात्कार तथा हत्या सरकारले गरेको हो। राज्यले गरेको हो, प्रशासनले गरेको हो। यसमा कुनै दूईमत नै छैन !
अब त लाज पनि लजायो होला कि दुई तिहाइ प्राप्त सरकार देखेर। हामी जनता त लज्जित छौँ नै ! सायद इतिहास पनि लज्जाजनक होला। एक जुगमा एक पटक मात्र सौभाग्य प्राप्त दुई तिहाइ सरकारको क्षमता, कार्यशैली, हैसियत र नैतिकता देखेर ! सायद मदन भण्डारी लज्जाले मुर्छित पर्दै होलान्, पुष्पलालहरू धिक्कार मान्दै होलान्, मनमोहनहरू पश्चात्तापको भुमरीमा रुमल्लिईरहेका होलान्, तर यता भने हिटलरको भुत्ते कुखुरालाई विष्ट्याईएको आत्मघाती चारोझैँ असरल्ल उखानहरूको आत्मतिरमा गम्न छाडेका छैनन् यहुदीहरु।
रत्ती पनि, मानौँ पित्को पनि चित्तबुझ्दो निर्णय गर्न नसक्ने दम्भरुपी दूईतिहाईको अजङगको पिलरले न राम्रोसँग धरातल टेक्न सक्यो न खुला जनआकाङ्क्षाका छानोहरू थेग्न सक्यो। आफ्नै मेरुदण्ड खिया लागिसकेको अवस्थामा एउटा बलात्कारीले सरकारको धरातल नै रसातलमा पुर्याईदियो भने अर्को अपराधीले जेनतेन टालेको दूईतिहाईको सरकाररुपी छानोमा भ्वाङ नै भ्वाङ पारिदियो।
कता कता टाल्नु, यता टाल्यो उता च्यातिन्छ, यता पुर्‍यो उता भासिन्छ, उँभो फर्कियो आफ्नै मुखमा छिटा वर्सिन्छन, धरातल सम्झियो अरिङ्गाल झम्टिन्छन। कति छेक्नु, कति थुन्नु, कति पुर्नु र कहाँनेर उभिनु क्षणभरका हुण्डरीजस्ता चुट्किला र टुक्काहरूले मात्र !
निर्मलाको बलात्कार भयो, हत्या भयो। निर्मलाअघि पनि अनि पछि पनि कयौँ चेलीहरू बलात्कृत अनि हत्याको सिकार भए। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गहन जिम्मेवारी बोकेको ब्याक्तिले माइकको कठालो समात्दै जनताको हुर्मत लिन्छन सरकारले बलात्कार गरेको हो ?सरकारले हत्या गरेको हो ?
ठोकुवाका साथ भन्नुपर्दछ, निर्मलाको बलात्कार तथा हत्या सरकारले गरेको हो। राज्यले गरेको हो, प्रशासनले गरेको हो। यसमा कुनै दूईमत नै छैन। अव त प्रत्येक पटक भन्नै पर्ने भएको छ कि, निर्मला अघि र पछिका जति पनि बलात्कार र हत्याका घटना भएका छन् ती सबैमा प्रत्यक्षरुपमा सरकार संलग्न रहेको छ, राज्य संलग्न रहेको छ, प्रशासन संलग्न रहेको छ।
किन र कसरी भनेर सोध्दै नसोध्नु होस, बरु कसरी र किन संलग्न हुँदैछ भनेर सोध्नु होस, जवाफ प्रस्ट पाउनुहुनेछ।
१० साउनमा बलत्कारपश्चात हत्याको सिकार बनेकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको परिवारले अझै न्याय पाउन सकिराखेका छैनन्। निर्मलाको न्यायका निम्ति देशभरबाट जनता एकसाथ जुर्मुर्याए, भिन्न भिन्न चरणमा देशैभर आन्दोलन गरिए। माइतीघर घेरियो, विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा निरन्तर दबाबमूलक भिडियो, रिपोर्ट, लेख, सम्पादकीय लेखियो, मैनबत्ती प्रज्वलन गरियो, साहित्य कोरियो, डकुमेन्ट्री बनाइयो। अपराधी सोझै किटान गरियो, अपराधी र दोषी फलाना फलाना हुन, तिनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्दछ भनेर सडक, सदन, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम, पत्रपत्रिकामा कडा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति, समाचार, प्रमाण लेखहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भए, तर सरकार भने भुत्ते !
अहँ, दूईतिहाईको आडम्बर, सरकार टसको मस गरेन, देश हल्लियो निर्मला हत्याकाण्डले तर शासक, शोषकहरूलाई किंचित पनि बाल भएन। कानमा तेल हालेजस्तो हाइसन्चो पो भयो कि ? सायद बलात्कृत हुनु थियो भइन, टन्टै साफ! सायद ओलीले यहीँ सोचेर त होला बलात्कारी १२ वर्षपछि फेला पर्न पनि सक्तछ भनेर भनिदिएको।
फेरि पनि भन्नै कर लाग्दछ, निर्मलाको बलत्कारपश्चात हत्या सरकारले नै गरेको हो, राज्यले गरेको हो, प्रशासनले गरेको हो। लोकतन्त्रमा जनआवाज मुखतिर हुनुपर्दछ। तर यहाँ त ठिक उल्टो छ। गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा हामीले जेनतेन प्राप्त गरेको बहुमूल्य धातूजडित आडम्बर दुई तिहाइको सरकारले जनमत होइन कि बलात्कारी, हत्यारा, ठग, बदमास, तस्करी, भ्रष्टाचारीहरूलाई नै मुखतिर गराउँदै आएको छ, संरक्षण गर्दै आएको छ।
३ महिनाभन्दा बढी भयो, निर्मलाको बलात्कारपश्चात् हत्या भएको। प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुनेगरि गृहमन्त्रालयले बल्लतल्ल लाजमर्दो गरी एउटा नाटक मञ्चन गर्‍यो। सरकारको साख, नाक, इज्जत, प्रतिष्ठा, गरिमा, महत्त्व सबै भष्मासुर हुनेगरि नै विज्ञप्ति जारी गरेर कारबाहीको ढोँग गर्‍यो। गृहको यस्तो निरीह एवं कपटी कार्यले जनता झनै रिसले चुर बनाउने काम मात्र गर्‍यो। उता भने महाअपराधी सरकारले संरक्षण गरेर पाले राखेका बलात्कारी एवं अपराधीहरू मैमत्त अट्टहास भर्दैहोलान।
विवेक कसरी नष्ट हुन्छ । हो सत्ताधारीकोर सत्तामा पुगेपछि हावामा उड्नु भनेर त कहीँ कतै लेखिएको छन्। कि कमिलाको झैँ प्वाँख पलाउँछ र अन्तिम अवस्थातिर ? दोषी किटानी भैसकेको छ। अपराधमाथि झनै अपराध गर्ने महाअपराधीतर्फ दुनियाँले औँलो तेर्स्याईरहँदा सत्तादारीहरू किन यस्तो मूर्कट्टा बन्दछन ?
आखिर के ले छेकेको छ सरकारलाई अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उँभ्याऊनको लागि ? यति विघ्न नाकै काटिने गरी अपराधीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ? दूईतिहाईको दुहाई दिने सरकार एउटा अपराधीको सामुन्ने यति विघ्न निरीह बनेको घटना त सायद संसारमा पहिलो नै होला, जसलाई बलात्कारी र हत्यारा संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ। एसपी विष्ट र भट्टलाई वर्खास्तगीको नाममा राज्यद्वारा जनताको आँखामा छारो हाल्न कदापि छुट छैन, मान्य हुनेछैन।
हो, सरकारले नै बलात्कारी, हत्यारा, अपराधी, तस्कर, गुन्डा, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर राख्दछ भने दोहोर्याएर, तेह्र्याएर मात्र होइन, बारम्बार भन्न करै लाग्दछ, दूईतिहाई प्राप्त सरकार नै अपराधी हो, अपराधीहरूकै संरक्षणमा दूईतिहाईको खम्बा अडिएको छ।
कुरो प्रस्ट छ, निर्मला बलात्कारी तथा हत्याराको पहुँच सिंहदरबारसम्मै छ र त सरकार यति विघ्न निरीह हुन बाध्य छ। चौतर्फी दबाब,आलोचना र आक्रोशको तारो बनेको आडम्बर सरकारले बल्ल बल्ल कनीकुथी निर्मला बलात्कार अनि हत्या काण्डमा प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीलाई कारबाहीको ढोँग रच्यो। तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश प्रसाद भट्टलाई सिकागो आँसु झार्दै भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नरहने गरी गृह वाट बिचरा स्वेतपत्र जसरि एउटा चिरकटो सार्वजनिक गर्‍यो, सायद मुटुमाथि ढ्याङ्रो नै बजारिएको होला गृहमन्त्रीको। जनताको आँखामा छारो हाल्ने र जनतालाई उल्लु बनाउने गृहको यस्तो चरित्रले पीडितमाथि झनै बज्रपात त पारेको छ नै, साथमा शान्ति सुरक्षा तथा न्यायका पक्षपाती देशभरका आम नागरिकमाथि धेरै ठुलो गद्दारी पनि गरेको छ। आम जनताले के बलात्कारी, हत्यारालाई संरक्षण दिनको लागि यत्तिका भोट दिएर जिताएका थिए यी शाषकहरुलाईर ?
कारबाहीको ढोँग किन ? गणतन्त्र दिवसको दिन प्रबल जनसेवाश्री पुरस्कारबाट विभूषित गरिदिए भैगो नि अपराध मेटाउने महाअपराधीलाई। यिनीलाई भोट दिएर जिताएका जनता पनि अहिले त निधारमा हात ठोक्दै धिक्कार भनेर धिकार्दाहुन।
हुँदा हुँदा निर्मला काण्डमा अव आसपासका सयौँको डिएनए परीक्षण गर्ने रे ! सरकारको यस्तो रवैयाले देशको इज्जत र शान कतिसम्म झुक्यो होला, सायद सत्तामा आसीन यी शासकहरूलाई मेसो पनि छैन। यो त सरासर दाजुलाई सक्तिन, भाउजूको हुर्मत लिन पछि पर्दिन भन्ने नेपाले उखान चरितार्थ भएन ? कुनै बलियो शङ्का, आधार र प्रमाणबिना कुनै गम्भीर अपराधमा धमाधम आफ्नै नागरिकको डीएनए स्याम्पल लिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवताको उल्लङ्घन हो । यसरी पनि अनुसन्धान हुन्छ र ? अब स्थानीय सबैलाई डीएनए चेक गर्दै सफाइ दिँदै जाने ? जगहँसाईको पनि सीमा हुन्छ नि ए शासकहरू ?
जनमतको यति विघ्न दुरुपयोग गर्ने यी शासकका छोरीचेलीले बलात्कारको पीडा खप्नुपरेको छैन, बलात्कृत हुनुपरेको छैन र त यी किर्नारुपी शासकहरूलाई रत्ती पनि पोल्न सकेको छैन। पीडा त आम नागरिकलाई छ, अचानाको पिर खुकुरीलाई के थाहा भनेझैँ यी शासकहरू जनताको पीडामाथि जनपछि झन् तलवार नचाउँदै छन्, बुट बजार्दैछन, पाखुरा सुर्किंदै छन् र मुख उज्याएर बसेका छन्।
निर्मलाजस्ता देशका कयौँ चेलीहरूले बेहोर्नुपरेको नियति र निर्मलाका अभिभावकले खप्नुपरेको पिडा कुनै दिन यिनै शासकहरूले बेहोरुन्, तब थाहा लाग्दछ, न्याय कस्तो हुँदो रहेछ, पीडा के रहेछ भनेर।
सरकारले जे गरेको छ, सरासर गलत गरेको छ। आडम्बर सरकार, बेलैमा सचिएकै राम्रो ! यहीँ शैली हो भने भोलि जलेको घरको एकमुट्ठि खरानी पनि नसिव नहोला। जनताले एक एक हिसाब चुकाऊनेछन। आफ्नो धरातल बिर्सिएर धेरै हावामा उड्नु राम्रो होइन, समय सबैको आउँछ। हिसाब चुक्ता हुनुभन्दा पहिला नै बलियो धरातलमा टेक्ने गर। आज देशभरका जनताले तिमीहरूको एक एक हिसाब गरिरहेका छन्।
निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउनै पर्दछ, निर्मलाको अभिभावकले न्याय पाउनै पर्दछ। यत्ति मात्र होइन, सारा देशका जनताको आवाज मुखतिर हुनै पर्दछ, सम्बोधन गरिनै पर्दछ। निर्मला बलात्कार अनि हत्यादेखि लिएर प्रमाण नष्ट गर्ने ती सबै महाअपराधीलाई कठोर कारबाहीको भागीदार बनाउनै पर्दछ । दुई तिहाइको आडमा आडम्वरता र अराजकतालाई मलजल नगरेकै राम्रो ! सत्ताले अन्धो बनाउँदछ, परपिडक बनाउँदछ। कहीँ त्यहीँ अन्धोपना र परपिडकको परिणति खरानीमा रुपान्तरित नभईजावस, अस्तु।
पीपीएल लिग क्रिकेटः धनगढीले पायो १ सय ४५ रनको चुनौती